​छाती र पेट जोडिएका शिशु जन्मिए
न्यूजलय मङ्गलबार ०४, मङि्सर २०७५
काठमाण्डौ । सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पतालमा छाती र पेटको माथिल्लो भाग जोडिएका दुई शिशुको जन्म भएको छ ।
कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका–५ स्युनाकी ललिता बुढाको कोखबाट अप्रेसन गरेर दुई बालिकालाई निकालिएको हो । दुई बालिकाको तौल ३ किलो ६ सय ग्राम रहेको अस्पतालले....
​प्रदेश २ मा बुधबार सार्वजनिक बिदा
धनुषा । सरकारले प्रदेश २ मा बुधबार सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ । मंसिर ५ गते मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको विशेष दिन अर्थात् पैगम्बर मोहम्मदको जन्म दिन परेकाले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको हो ।
सरकारको २०७४ साल चैत २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार....
​भित्री वस्त्र मात्रै लगाएको अवस्थामा युवतीको शव फेला
काठमाडौं । काभ्रेमा एक युवतीको शव भित्रि वस्त्रमात्र लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको छ । जिल्लाको पनौती– ५ की करिब २२ वर्षीया युवती सुधा केसी घर नजिकै रहेको आइटी पार्क पछाडि रहेको रुखमा झुन्डिरहेको अवस्थामा फेला परेकी हुन् ।
​‘म प्रहरी हूँ, भन्दै सर्वसाधारण ठग्ने नक्कली प्रहरी पक्राउ
सप्तरी । सप्तरीको नेपाल–भारत सीमानाकामा ‘प्रहरी हूँ’ भन्दै सर्वसाधारणसँग रकम असुली गर्दै आएका एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
राजविराज नगरपालिका–७, खर्साल टोल निवासी शिवनारायण यादवका छोरा २० वर्षीय जोगीन्द्र भनिने सागर यादवलाई सप्तरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
​प्रहरीद्वारा १४ हजार बोट गाँजा फडानी
धनकुटा । धनकुटाको बिभिन्न स्थानमा प्रहरीले अन्दजी १४ हजार ६ सय ८० बोट अवैध गाँजा फडानी गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटा, इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्ताङको सहकार्यमा भेडेटार रधनकुटा शहिदभूमी गाउँपालिका–१ कर्कले गुर्धुम, गोपालपुर, घंगरु, हंगुवालगायतको बिभिन्न ठाउँमा गरि ९ हजार....
​लागुऔषधसहित विराटनगर र इटहरीका गरी दुई जना पक्राउ
न्यूजलय सोमबार ०३, मङि्सर २०७५
विराटनगर । सोमबार प्रहरीले लागुऔषध सहित २ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । मोरङको विराटनगर १५ भन्सार कार्यालयको १ नम्बर ढाट नजिकैबाट विराटनगर ६ का २४ वर्षीय समर साह र सुनसरीको इटहरी ४ का ३२ वर्षीय सुवास घिमिरेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
​इलाममा बिपी कोइरालाको शालिक अनावरण
इलाम । इलाममा पूर्व प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको शालिक अनावरण गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस माई नगरपालिकाको आयोजनामा जिल्लाको माई नगरपालिकामा रहेको दानाबारीमा कोइरालाको शालिक अनावरण गरिएको हो । अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सरकारकै कारण संघीयता धरापमा....
​स्किल क्याम्पस इटहरीमा नयाँ सत्रको लागि भर्ना खुल्यो
इटहरी । इटहरी–.स्थित स्किल क्याम्पसमा नयाँ सत्रको लागि भर्ना खुलेको छ ।
यो क्याम्पस बेलायतको एस.क्यु.ए. बाट सम्बन्धन प्राप्त पूर्वाञ्चलकै पहिलो शैक्षिक संस्था हो । यहाँ डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट, कुलिनरी अर्टस्, बरिष्ठ ट्रेनिङ तथा एड्भान्स डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्टको....
​ओखलढुंगामा ठेक्का लिने डडेलधुराका मेयरले जनता ढाँटे
ओखलढुंगा । ओखलढुंगामा निर्माणाधीन एउटा पुलको ठेक्का लागेको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण सकिएको छैन । उक्त पुलको ठेक्का लिने कम्पनि डँडेल्धुराका मेयरको स्वामित्वमा छ ।
मोलुङ गाउँपालिका र सुनकोसी गाउँपालिका जोड्ने मोलुङ खोलाको मान्द्रे दोभानमा निर्माणाधीन पक्की पुलको निर्माण सोचेजस्तो अघि....
विराटनगरमा लागूऔषधसहित धरानका एक युवक पक्राउ
विराटनगर । प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका–१५ भन्सार कार्यालयको १ नम्बर ढाटबाट लागूऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा धरान उप–महानगरपालिका १६ का २७ वर्षीय मदन लिम्बु रहेका छन् । विशेष सुराकीको आधारमा लागूऔषध नियन्त्रण व्यूरो विराटनगरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले लिम्बुको साथबाट....